လင်းပိုင် Browser ကို APK ကိုဒေါင်းလုပ် | မိုဘိုင်းအတွက်ကုန်ကြမ်း APK ကိုအကောင်းဆုံး Apps ကပ
လင်းပိုင် Browser ကို APK ကို Android အတွက် Download | မိုဘိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံး Apps ကပ
လင်းပိုင် Browser ကို APK ကိုဒေါင်းလုပ်: လင်းပိုင် Browser ကိုအမြန်တင်အလျင်နှင့်အတူအန်းဒရွိုက်အတွက်အကောင်းဆုံးကို web ရှာဖွေသူ browser ကိုဖြစ်ပါတယ်, HTML5 ဗီဒီယိုပါဝင်သူ, Adblock, tab ကိုဘား, sidebars တလျောက်, ရှာဖွေခြင်းနှင့် flash ကိုပါဝင်သူရုပ်ဖျက်. အဖြစ်မကြာမီဖောက်သည်ကျွမ်းကျင်မှုအဖြစ်အမြန်, လင်းပိုင်၏ကောင်းသောနှင့်ပုဂ္ဂလိက Net က, common Cell Web looks like torture.
 ကျော်လွန် 150,000,000 Android နှင့် iOS အပေါ် downloads,
nice Options ကို
✔ Flash ကိုပါဝင်သူ
✔ AdBlock (blocker ပေါ်လာ)
✔ bookmarks & Add-ons တွေကို sidebar မှာ
★ Flash ကိုပါဝင်သူ
လင်းပိုင် Browser ကိုအပေါ်ကူညီ Android အတွက်ပါဝင်သူနှင့်အတူအကောင်းဆုံးဂိမ်းနှင့် HD ဗီဒီယိုကျွမ်းကျင်မှု Get.
★ AdBlock (blocker ပေါ်လာ)
Dolphin Browser is likely one of the best AdBlock Browser. Adblock နှင့်အတူ, you’ll be able to block popups, ကြော်ငြာ, နဖူးစည်းစာတမ်းတွေ & ad-videos.
Discover Adblock add-on ကိုဒီမှာ: http://alturl.com/27rch
★ tabs များဘားတစ်ဦးကနံပါတ်တစ်ခု
ဒါဟာသင့်ရဲ့ပွင့်လင်း tabs များပြသထားတယ်, သငျတို့သပွတ်ဆွဲခြင်းအားဖြင့်သူတို့ကိုအကြားဖလှယ်ခွင့်ပြု. Allow you to browse the online as PC Browser & ဒက်စ်တော့ဘရောက်ဇာ.
★ bookmarks & Add-ons တွေကို sidebar မှာ
It may be accessed by swiping to the best from the left fringe of the display screen and exhibits your bookmarks and searching historical past. ဘယ်ဘက်ကိုပွတ်ဆွဲခြင်း, you’ll be able to benefit from the best companies with add-ons, Video Downloader ၏ဆင်တူ, PDF ကိုခြင်းနှင့်လင်းပိုင်များ Net က Translate, ဒါထွက်.
ရိုးရှင်းစွာအကို Google နှင့်အတူရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ဖလှယ်, Yahoo က, Yandex, Bing မှ, DuckDuckGo, ဒါထွက်.
HTML5 ကို Download လုပ်ပါ, Flash movies များနှင့်ဗီဒီယို Downloader ကိုအတူက်ဘ်အနေဖြင့်အမြန်အလျင်လျှံနှင့်အတူအပို. သင်လည်းရိုးရှင်းစွာဖိုင်ကိုကြီးကြပ်ရေးမှူးအတွင်းဆွဲယူတဲ့ recordsdata delete သို့မဟုတ်လွှဲပြောင်းနိုင်.
★ Sync ကို
Sync your historical past, bookmarks ကို, and passwords. Plus အား, simply open and push tabs and web sites throughout Android, iPhone ကို, အိုင်ပက်, ဆယ်လူလာ & laptop browser together with Chrome, Firefox, and Safari utilizing Dolphin Join. You may even get pleasure from content material pushed from desktop browser with flash participant for Android.
Entry the Web by creatingaprivate Gesture for web sites and customary options. ဥပမာအားဖြင့်, drawingaletter ”D” to go to Duckduckgo or “B” to go to Bing.
Dolphin remembers your most lately used apps that will help you simply share content material to Fb, တွစ်တာ, WhatsApp ကို, Skype နဲ့အပို.
လင်းပိုင် Browser ကို – လျင်မြန်စွာ, ကိုယ်ပိုင် & ဒီနေရာမှာ Adblock Apk Download,
လင်းပိုင် Browser ကို – အစာရှောင်ခြင်းပုဂ္ဂလိကအင်တာနက်ကိုရှာရန် v12.0
Flash Player ကို .apk ဒေါင်းလုပ်
ရဲရင့် Browser ကို: အစာရှောင်ခြင်း Adblock APK ကိုဒေါင်းလုပ်
Puffin Web Browser .apk ဒေါင်းလုပ်
အခမဲ့နယူးဗားရှင်းအတွက် Chrome Browser ကို V58.0.3029.83 ဒေါင်းလုပ်
– Net to PDF Converter & အယ်ဒီတာ;
Dolphin Browser Apk – Adblock, လုံခြုံစိတ်ချ & Personal by Dolphin Browser
ပုံစံ: 12.zero.9 (781)
up to date ဖြစ်နေဗိုလ်လုပွဲ: ဇွန်လ 7, 2018
file ကိုတိုင်းတာခြင်း: 20 mb
ဖီဖာ 17, ဖီဖာမိုဘိုင်းဘောလုံး 9.2.00 APK ကိုဒေါင်းလုပ် – လက်ကိုင်ဖုန်းများအတွက်အကောင်းဆုံး Apps ကပ
Google Cast ကို Receiver APK ကိုဒေါင်းလုပ် – လက်ကိုင်ဖုန်းများအတွက်အကောင်းဆုံး Apps ကပ
App ကို Backup ကို & v1.0.5 Restore – APK ကို Download လုပ်ပါ
ရဲအရာရှိ – တှေ့ဆုံ, chat, & ပရောပ v2.8.1 – APK ကို Download လုပ်ပါ
အဆိုပါ Escapists 1.0.9 APK ကိုအန်းဒရွိုက်နောက်ဆုံးဗားရှင်းသည် Download 2018
Apps2Fire APK ကိုဒေါင်းလုပ် | မိုဘိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံး Apps ကပ
တည်ငြိမ်သော – သေချာစွာစဉ်းစား, အိပ်, APK ကိုဒေါင်းလုပ်အပန်းဖြေ – အခမဲ့ကနျြးမာရေး & အသုံးပြုနိုင်မှု
PES 2018 PRO Evolution ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ APK ကိုဒေါင်းလုပ် | မိုဘိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံး Apps ကပ